The Vampire Diaries : Season2( 2010 ) - Myanmar Asian TV
ကဲ … The Vampire Diaries Season2လေးကို ပြန်စပါပြီနော် … ဇာတ်လမ်းကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေသူများအတွက် နည်းနည်းပြန်နွှေးပေးပါ့မယ် … Season 1 Episode 22 ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ Katherine ရောက်လာပြီး John Gilbert ရဲ့ သဘာဝလွန် အန္တရာယ်တွေရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ မှော်လက်စွပ်ဝတ်ထားတဲ့ လက်ကိုဖြတ်ပြီး သတ်မယ်လို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Elena ရောက်လာတယ် …
တဖက်မှာလဲ John Gilbert ရဲ့ အကြံအစည်ကြောင့်ပဲ Jonathan Gilbert ရဲ့ device ကို အသုံးပြုပြီး ဗင်ပိုင်ယားတွေကို မျိုးတုန်းအောင် မီးရှို့သတ်ဖြတ်ဖို့ ထောင်ခြောက်ဆင်ဖမ်းရာမှာ Damon နဲ့ မြို့တော်ဝန် Lockwood ပါ မီးထဲပါသွားခဲ့တယ် … Damon ရဲ့ Katherine ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ ဂူတံခါးကို ဖွင့်ရာကနေ ဆုံးပါးသွားတဲ့ Bonnie ရဲ့ အဘွားသေဆုံးပြီးနောက်မှာ Bonnie ဟာလဲ ပြောင်းလဲသွားပြီး စွမ်းအားကောင်းလာတဲ့ စုန်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခာတယ် … Stefan မျက်နှာကြောင့် Bonnie ဟာ Damon ကို ကယ်တင်ပေးခဲ့လို့ Damon အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ မြို့တော်ဝန်ကတော့ သေဆုံးခဲ့ရတယ် …
နောက်တဖက်မှာ လူသားမဟုတ်တဲ့ creature တွေသာ ကြားနိုင်တဲ့ frequency နဲ့ ထုတ်လွှင့်တဲ့ Johnston တီထွင်ထားတဲ့ device ဟာ Lockwood သား အဖပေါ်ကို သက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ် … Mayor Lockwood ကတော့ မီးထဲမှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပေမဲ့ Taylor Lockwood ကတော့ ကားမောင်းရင်း device က ထုတ်လွှင့်တဲ့ ဆူညံသံကြောင့် ကားတိမ်းမှောက်ပြီး Caroline တယောက် စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကို ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ် …
ကဲ …. Season2မှာတော့ Lockwood မိသားစုအပေါ် ဘာလို့ device က သက်ရောက်မှုရှိတာလဲ ? Katherine ကရော ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Mystic Falls ကို ပြန်လာခဲ့ရတာလဲ ? နောက်ထပ် သဘာဝလွန် ဘယ်လိုမျိုး creature တွေ ပါဝင်လာနိုင်ဦးမလဲဆိုတာတော့ The Vampire Diaries Season2မှာ ဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော် …
The Vampire Diaries ဟာဆိုရင်ဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားမှာ စွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်လာစေတဲ့အထိ အလွန်ရေပန်းစားခဲ့သော US TV Series တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး rating အရ IMDb မှာ 7.7/10 နှင့် Rotten Tomatoes မှာ 85% အသီးသီးရရှိခဲ့ကာ The CW network ရဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ စီးရီးတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ် …
Starring: Candice King, Ian Somerhalder, Julia Vasi, Kat Graham, Matthew Davis, Michael Malarkey, Paul Wesley, Zach Roerig,
Trailer: The Vampire Diaries : Season2( 2010 )